Herinandro fitsapana eo amin'ny Epic Games sy Apple. Famintinana ny zava-mitranga | Avy amin'ny mac aho
3 Mey lasa teo Nanomboka ny fitsarana teo amin'ny Epic Games sy ny Apple. Nanomboka izany rehetra izany rehefa nanapa-kevitra ny hanitsakitsaka ny fitsipiky ny App Store ilay mpamokatra lalao video sy ny fanapahan-kevitra noraisin'izy ireo avy any Apple taorian'izay, dia very ny kaonty mpamorona azy ireo aza. Efa nanao izany isika herinandro fitsarana ary ity no mahaliana indrindra mandritra ireo andro ireo.
1 Ny mpisolovava an'i Apple dia nitondra ny roa andro voalohany fitsarana tany amin'ny tanimboly
2 Nanomboka tamin'ny andro faha-3 ka hatramin'ny faha-5 ny fitsarana teo amin'ny Epic Games sy ny Apple dia tsy dia zava-dehibe loatra ilay zavatra
Ny mpisolovava an'i Apple dia nitondra ny roa andro voalohany fitsarana tany amin'ny tanimboly
Nanomboka tamin'ny fanambarana nataon'ny orinasa roa tonta izany. Ny tohan-kevitra voalohany, samy miaro ny toerany eo anatrehan'ny mpitsara ny raharaha. Epic dia nifantoka tamin'ny fampisehoana an'i Apple sy ny App Store ho toy ny tontolo iainana ekena sy manohitra ny fifaninanana izay tsy manome tombony ho an'ny mpanjifa izay ampirisihin'i Apple. Ilay orinasam-pamokarana dia nanolotra mailaka marobe nalefan'i Steve Jobs, Craig Federighi, Luca Maestri, Tim Cook, Eddy Cue ary Scott Forstall izay miresaka momba ny fananganana paikady fananganana an'i Apple. rindrina tsy azo resena ho an'ny ambiny.
Tim Sweeney, CEO an'ny Epic, nijoro ho vavolombelona momba ny maodelin'ny orinasan'ny orinasany, ny fifandraisana amin'ny orinasa toa an'i Microsoft sy Sony, sy ny maro hafa. Zava-misy mahaliana Nitranga izany rehefa niaiky i Sweeney fa mampiasa iPhone izy noho ny fifantohan'i Apple amin'ny tsiambaratelo ary fiarovana ho valin'ny fanontanian'ny mpisolovava an'i Apple.
Ireo mpisolovava an'i Apple kosa nifantoka tamin'ilay tombony omen'izy ireo ho an'ny mpamorona eo amin'ny sehatr'izy ireo. Anisan'izany ny fahazoana miditra amin'ny fananana ara-tsaina an'i Apple, toy ny API sy loharanom-pahalalana ho an'ny developer. Nifantoka betsaka tamin'ny fampiasan'i Epic ny API misy sary Metal izy ireo. Nanasongadina ny mailaka anatiny avy amin'ny mpitantana Epic nidera an'i Metal ny orinasa. Tamin'ny taona 2018, Epic dia nanolotra teny nalaina ho an'ny WWDC, tamin'ny fangatahan'i Apple, nidera an'i Metal.
fa ny fanalahidy dia hita ao amin'ireto fanontaniana sy valiny manaraka ireto:
Apple Lawyer: Raha nilaza taminao i Apple fa hanome anao fifanarahana izy ireo fa tsy misy mpamorona hafa, Hanaiky izany ve aho?
Sweeney: Eny, ho azoko izany.
Araka ny nolazain'izy ireo, Tsy misy fanontaniana intsony, Andriamatoa anao.
Nanomboka tamin'ny andro faha-3 ka hatramin'ny faha-5 ny fitsarana teo amin'ny Epic Games sy ny Apple dia tsy dia zava-dehibe loatra ilay zavatra
Ny zavatra sarotra indrindra dia ny nahitan'i Apple ny tenany teo anelanelan'ny vato sy ny toerana sarotra ialana Atsaharo ny fanohanana ny fividianana rindrambaiko ao anaty rindrambaiko i Netflix ao amin'ny App Store. Nisy kiran'ny mailaka nampiseho fifandraisana anatiny tao amin'ny Apple raha vao nahalala ny drafitr'i Netflix ny orinasa. Apple mpitantana ao amin'ny kofehin'ny mailaka dia nandamina fivoriana isan-karazany niaraka tamin'i Netflix mba hiresahana ny fitsapana nomanin'ilay orinasa.
Tamin'ny andro fahefatra dia nanomboka nalaza izy ireo vavolombelona vitsivitsy:
El Filoha lefitry ny App Store Nanazava izy fa efa ela i Apple dia nifantoka tamin'ny fiarovana ao amin'ny magazay ary nandà ny sosokevitra amin'ny zavatra toy ny fomba fandoavam-bola hafa sy ny fampiharana fampidinana. Notsipahan'ny mpitsara Rogers ny fikomian'i Epic tsy tapaka hanaiky antontan-taratasy sasany ho porofo, mifototra amin'ny anton-javatra toy ny maha-mety azy sy ny antontan-taratasy manonona antoko fahatelo. Tsy nanaiky izany ny filoha lefitra sy ny mpisolovava azy fifandraisana anatiny Apple sasany ho fitsapana. Zavatra izay tsy isalasalana fa mora ampiasaina ho an'ny orinasa paoma.
Amin'ny andro fiasana farany amin'ny fitsarana fa mbola misy kitay betsaka sisa tavela, Trystan Kosmynka, amin'ny antsipiriany fa manodidina ny 5 tapitrisa ny fangatahana alefa any amin'ny App Store isan-taona sy izany ny tahan'ny fandavana ny fampiharana dia latsaky ny 40%. Tamin'ny taona 2019, fampiharana 4.808.685 36 215.000 no natolotra ho an'ny fizotry ny fizotran'ny App Store, ary ny XNUMX% amin'izy ireo dia nolavina. Amin'ireo fampiharana nolavina ireo dia manodidina ny XNUMX no nanitsakitsaka ny torolàlana momba ny fiainana manokana nataon'i Apple.
Amin'izao fotoana izao dia "chicha" kely fa mbola tsy nikasika ny tifitra goavan'ny orinasa handeha hanambara. Miambina hatrany izahay satria ity fitsarana ity afaka miova be amin'ny Apple ary noho izany ho an'ireo mpampiasa fitaovana paoma.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Herinandro fitsapana eo amin'ny Epic Games sy Apple. Famintinana ny zava-mitranga